Kai Lightner နှင့်ပတ်သတ်သည့်အဖြေများ | ပြီးပြည့်စုံသောဆင်းသက်လာတောင်တက်စနစ်များ
ငါအသက် ၆ နှစ်မပြည့်ခင်အားကစားရုံတစ်ခုမှာမတက်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီ့မတိုင်ခင်ကအရာရာကိုတက်ဖို့အခက်တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရှိကလေးဂိတ်များကိုကျော်ပြီး (ကျွန်ုပ်လမ်းမလျှောက်မီ) လမ်းမပေါ်ရှိဘတ်စကက်ဘောကွင်းတွင်နေ့လည်စာစားသည်အထိအမေသည်တစ်စုံတစ်ခုကိုတက်နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လဲကျ။ နာကျင်မည်ကိုအမြဲတစေကြောက်ရွံ့နေခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့ကိုအားကစားများစွာကစားရန်ကြိုးစားသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ ADHD သည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုခုကိုကျွန်ုပ်၏အပြည့်အဝအာရုံမစိုက်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခဲ့သည်။ တစ်နေ့ကျတော့အမေကအလုပ်ရှင်အပြင်မှာသူဌေးနဲ့စကားပြောနေတုန်းပေ ၅၀ အလံတိုင်ကိုတက်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်အမေရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကလမ်းလျှောက်ထွက်သွားရင်းသူမအလွတ်ထွက်သွားမယ့်အစားသူမကကျွန်တော့်ကိုကူညီပြီးဒေသခံတောင်တက်အားကစားရုံသို့လိပ်စာကိုကပ်ခွာစာရေးပြီးအမေကိုပေးလိုက်တယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာအမေကအားကစားခန်းမထဲခေါ်လာပြီးတောင်တက်နိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့စားပွဲပေါ်ကလူကိုတောင်းပန်လိုက်တယ်။ ငါအားကစားခန်းမထဲဝင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါမရှင်းပြနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုခံစားရတယ်။ အရင်ကငါကြိုးစားခဲ့ဖူးတာတွေနဲ့မတူဘဲငါရှေ့မှာတောင်တက်တဲ့နံရံအပြင်တခြားအရာတွေကိုအာရုံစိုက်ဖို့အခက်တွေ့ခဲ့တယ်။ ငါထို့နောက်ထို့နောက်အားကစားရုံမှာနေ့စဉ်နီးပါးတက်ပြီးနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ယှဉ်ပြိုင်အသင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
တောင်တက်တာကအမြဲတမ်းကျွန်တော့်ကိုပျော်ရွှင်စရာခံစားချက်တစ်ခုပေးခဲ့တယ်။ ငါတက်နေစဉ်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအမြင့်ဆုံးထိန်းချုပ်ထားသည်ဟုခံစားရသည်။ ကျွန်တော်လေ့ကျင့်လေလေ၊ ကျွန်ုပ်ရလေလေ၊
ငါ 14 နှစ်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးငါသုံး ဦး စလုံး (ဦး ဆောင်လမ်းပြ, မြန်နှုန်းနှင့်ကျောက်တုံးများ) တွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပါပြီ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုအများစုသည်ခဲနှင့်ကျောက်သားများယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမှလာခြင်းဖြစ်သည်။
ငါယှဉ်ပြိုင်ခြင်းစည်းကမ်းများကိုအရှိဆုံးထိန်းချုပ်မှုနှင့်သည်းခံခြင်းလိုအပ်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါခဲတောင်တက်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည် ငါဟာကျောက်တုံးကျောက်ခဲကြီးတွေကိုလှော်ခတ်ရတာအရမ်းအားရတယ်၊ တိုတောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်၎င်းမှာပါ ၀ င်ရန်ပစ္စည်းကိရိယာများနည်းရန်နှင့်အစီအစဉ်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်သည်ဟူသောအချက်ကြောင့်အမြန်နှုန်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အခက်ခဲဆုံးဆုံးမဆုံးဖြစ်သော်လည်း၊ PR အသစ်များသတ်မှတ်ခြင်း၏!
တစ်ပတ်ကို ၅ ရက်လေ့ကျင့်ပြီးအားကစားရုံအားလုံးမှာခဲနဲ့ကျောက်သားတွေကိုပါထည့်သွင်းလေ့ရှိတယ်။ ရက်သတ္တပတ်၏သုံးရက်စွမ်းအင်ခံနိုင်ရည်ကျောက်သားနှင့်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်ပါ၏ ရက်သတ္တပတ်၏နှစ်ရက်သည်ကျောက်တုံးများဖြင့်ကျောက်တုံးများကိုပစ်ခတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
စည်းကမ်းသုံးမျိုးစလုံးသည်အမျိုးမျိုးသောလေ့ကျင့်မှုမျိုးလိုအပ်သည်။ ခဲတောင်တက်ခြင်းတွင်ရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်တက်ခြင်းပါဝင်သည်။ ကျောက်သားပြproblemsနာများသည်တိုတောင်းပြီးတစ် ဦး ချင်းအနေနှင့် ပိုမို၍ ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအင်ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သောလေ့ကျင့်မှုလိုအပ်သည် အမြန်တက်ခြင်းသည်အခြားမည်သည့်စည်းကမ်းနှင့်မဆိုလုံးဝကွဲပြားသည်။ ထို့ကြောင့်မြန်နှုန်းမြင့်လေ့ကျင့်မှုသည်၎င်းကိုထူးကဲစေရန်အတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောအမြန်နှုန်းရိုးပေါ်တွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါပုံမှန်အားဖြင့်ငါ့နည်းပြနှင့်အတူဘော်စတွန်အတွက်လေ့ကျင့် Shane Messer။ သို့သော်ငါပြိုင်ပွဲများအတွက်ခရီးသွားတဲ့အခါ, ငါလေဆိပ်မှာရှည်လျားသောစစ်မှုထမ်းဖို့နေရာထိုင်ခင်းသို့မဟုတ်ယှဉ်ပြိုင်မှုမတိုင်မီအလေ့အကျင့်တိုတောင်းသောလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ငါလိုက်နာတဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ရှိသည်။
COVID သည်တောင်တက်ခြင်းဆိုင်ရာအားကစားရုံအများစုကိုပိတ်ထားပြီးမသင့်တော်သောနေစရာလိုအပ်သောအခြေခံပစ္စည်းကိရိယာများကိုအသုံးပြုခွင့်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။ ဒီအတွက်ကြောင့်ငါနဲ့ငါ့နည်းပြတွေဟာအိမ်တွင်းသင်တန်းတွေကိုပြုပြင်ပြီးအိမ်တောင်တက်တောင်နံရံတစ်ခုတောင်တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။
ငါအပါအဝင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲအများအပြားအတွက်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည် လူငယ်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ နှင့်များစွာသောကမ္ဘာ့ဖလား။
၂၀၁၇ မှာဒုတိယအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့အမျိုးသားချန်ပီယံလိဂ်အနိုင်ရခြင်း၊ ၂၀၁၄ လူငယ်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံ.
နောက်ဆုံးတွင်ဤပြိုင်ပွဲများကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာသင်၏ပြင်ဆင်မှုနှင့်သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်ပါ၊ ကြိုတင်လေ့ကျင့်ထားသည့်အထီးကျန်မှုအတွက်ခိုင်မာသောလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိရန်နှင့်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ။
ငါကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်တောင်တက်နှစ်မျိုးစလုံးကိုပျော်မွေ့။ ကျွန်ုပ်၏အပြိုင်အဆိုင်စိတ်ဓာတ်ကကျွန်ုပ်အားပြိုင်ပွဲများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ကျောက်ဆောင်တောင်တက်ခြင်းသည်ပြိုင်ပွဲများအတွက်သင့်လျော်သောအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သျောလညျး, ငါအစဉ်အမြဲပြင်ပတောင်တက် escapism ၏ပုံစံအဖြစ်မြင်ကြပြီ ဝေးလံခေါင်သီသည့်အပြင်ဘက်ကျောက်တောင်များ၏တည်နေရာသည်သဘာဝကိုခံစားရင်းတစ်ချိန်တည်း၌ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သောအရာကိုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
တိကျသောကျောက်တုံးတစ်မျိုးကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသော်လည်းစပိန်တောင်တက်ခြင်းကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ခဲ့သည်! ငါအဲဒီမှာတောင်တက်ပျော်မွေ့ကျောက်အများအပြား, အပါအဝင် Margalef, ဆန်တာလင်ယာနှင့် Siruana.
ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ် Adam Ondra အများဆုံး။ သူဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတောင်တက်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမကဘဲသူနဲ့ကျွန်တော့်ကိုအလားတူခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားရှိပြီးခက်ခဲတဲ့တောင်တက်မှုတွေကိုပြီးမြောက်အောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအမြဲတမ်းတွေ့နေရပါတယ်။
ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတီရှပ်သည်“ Nope” ဟူသောစာလုံးကိုရှေ့အက္ခရာအကြီးဖြင့်ဖော်ပြထားသည်။ ငါနင့်နိုးလာပြီးဝတ်ဆင်သည့်အခါတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုရယ်စေသည့်အခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်ကိုအပြည့်အဝကိုယ်စားပြုသည်ထင်သည်။
ငါအများဆုံးနားထောင်ကြပြီအနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ဖြစ်ကြသည် နွေရာသီ Walker က နှင့် Khalid က။ နှစ် ဦး စလုံးဟာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးအေးဆေးငြိမ်သက်သောဂီတစတိုင်ရှိသည်။
စပီ! ကျွန်ုပ်နှင့် JBL စပီကာများမပါဘဲမည်သည့်ခရီးကိုမျှသွားမည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတောင်တက်ရုပ်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းဖြစ်သည် Reel Rock ရှိ Margo Hayes ၏အင်္ဂါရပ်; ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမတက်တဲ့ရုပ်ရှင်က Black Panther ပါ။